MYUTSAWMYIT : စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသတင်း: ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း လွန်းမောင်ရဲ့ နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ ထိုးတာ ဘယ်သူလဲ ?
ဖြေ။ ။ ကျနော်က ငယ်ငယ်ကတည်းက ဆင်းရဲခဲ့တဲ့ မိသားစုက ဆင်းသက်လာသူပါ။ ဒီအချိန်မှာ ငယ်ငယ် က ဘ၀ ကြမ်းသလောက် မကြမ်းပါဘူး၊ ပျော်ပါတယ်။ အံဝင်ခွင်ကျ ရှိတယ်ဆိုတာထက် လူတိုင်းက သူရတဲ့ ဘ၀မှာ နေပျော်နေဖို့ လိုပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ဒီအလုပ်အတွက် အချိန်တောင် မလောက်ပါဘူး။
မေး။ ။ နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့ စာရင်းစစ်ချုပ် တယောက် ဘ၀ကနေ ဒီလိုမျိုး ဈေးရောင်းရတဲ့ ဘ၀တခု နဲ့ ဖြတ် သန်းဖို့ ဘယ်လိုစိတ်ကူး ရခဲ့တာလဲ။ အရင်ကတည်းက စိတ်ကူးထားခဲ့တာလား။
ဖြေ။ ။ ပြောင်းသွားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဒီလိုပါ။ နိုင်ငံတော်က အနားပေးလိုက်တယ် ဆိုတော့ နား လိုက်တာပေါ့။ နားချိန်မှာ အေးအေးဆေးဆေး နားချင်ပေမယ်လို့ အမျိုးသမီးရဲ့ လုပ်လက်စ ဒီဆိုင်လုပ်ငန်း ကြီးရှိတော့ ကိုယ်က တယောက်တည်းကို လွှတ်ရုန်းလို့ မရဘူး။ မရတဲ့အခါ သူ့အလုပ်ကို ထောင့်ပေါင်းစုံ ဟာတဲ့ နေရာတွေမှာ လိုက်ဖြည့်ပြီး လုပ်ပေးတာပေါ့။
စားပွဲထိုး ၅ ယောက်လိုရင် အဲဒီနေရာကို ငါရအောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ နောက်ဆုံး ဗုန်းဗုန်းလဲသွားတဲ့ အထိပေါ့။ တချိန်တုန်းက နိုင်ငံ့ တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်နေတဲ့ အချိန်တုန်းကလို မိသားစုနဲ့နေလည်း မိသားစု တာဝန် ကျေရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာ။ အမျိုးသမီးကလည်း ကိုယ်မပါဘဲ တယောက် တည်း ပင်ပန်းနေခဲ့ရတာ ၁၀ နှစ်ကျော်ရှိပြီ။ ကိုယ်က အခု ဝင်လုပ်တာ လပိုင်းပဲ ရှိသေးတယ်။
ဒီအကြောင်း အပြည့်အစုံကို ဧရာဝတီ မြန်မာပိုင်းစာမျက်နှာက " နောက်ကျော ဓားနဲ့ အထိုးခံခဲ့ရတာ" ဆိုတာမှာ အပြည့်အစုံ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဦးလွန်းမောင်ရဲ့ နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ ထိုးတာ ဘယ်သူလဲ??????
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:00 PM